Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany mikasika ny Filipina » Horohoron-tany mahery tany Filipina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao farany mikasika ny Filipina • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nandritra izay 7 andro lasa izay, dia nihovotrovotra tamin'ny horohoron-tany 1 tamin'ny tandrify 7.0, ny horohoron-tany 1 teo anelanelan'ny 5.1 sy 5, ny horohoron-tany 4.0 teo anelanelan'ny 5.0 sy 35 ary ny horohoron-tany 3.0 teo anelanelan'ny 4.0 sy 187
Tsy misy olana momba ny fampitandremana tsunami
Ny horohoron-tany mahery tany Filipina dia namely ny marainan'ny alakamisy.
Ilay horohoron-tany dia tokony ho tsapan'ny olona rehetra tao amin'ny faritry ny ivon-toerany.
Tsy mbola namoaka fampitandremana tsunami ho an'ny horohorontany androany ny manampahefana any Philippines
Horohoron-tany mahery, Magnitre 7.1 dia namely ny ranomasina Philippines, 74 kilometatra (46 miles) atsimo andrefan'ny Mati, Filipina amin'izao fotoana izao.
Ny horohoron-tany dia namely ny marainan'ny alakamisy 12 aogositra 2021 tamin'ny 1:46 maraina (GMT +8) ora teo an-toerana tamin'ny halalin'ora 10 km.
Miorina amin'ny tahirin-kevitra momba ny seismika voalohany, ny horohoron-tany dia tokony ho tsapan'ny ankamaroan'ny olona tao amin'ny faritry ny ivon-toerany. Mety ho niteraka hazavana maivana sy simba izany.
Fihorohoroana antonony angamba no nitranga tany Bobon (pop. 4,500) miorina 64 km miala ny ivon-toerany, Tibanbang (pop. 7,800 77) 105,900 km, Mati (pop. 79) 20,300 km, Manay (pop. 80) 8,000 km, Sigaboy ( pop. 81) 9,700 km miala, ary San Isidro (pop. 85 XNUMX) XNUMX km.
Any Lupon (pop. 27,200) izay misy 96 km miala ny ivon-toerany, dia ny tanànan'i Davao (pop. 1,212,500) 144 km, ny Magugpo Poblacion (pop. 233,300) 149 km, ary ny Panabo (pop. 84,700) 150 km miala, ny horohoron-tany dia tokony dia nahatsapa ho maivamaivana.
Tsy misy ny tatitra eo noho eo na ny fahavoazana na ny fahasimbana amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nisy fampitandremana tsunami navoaka hatreto.
Nandritra izay 7 andro lasa izay, Filipina dia nihorohoro tamin'ny horohoron-tany 1 tamin'ny tandrify 7.0, ny horohoron-tany 1 tamin'ny maridrefy 5.1, ny horohoron-tany 5 teo anelanelan'ny 4.0 sy 5.0, ny horohoron-tany 35 teo anelanelan'ny 3.0 sy 4.0, ary ny horohoron-tany 187 teo anelanelan'ny 2.0 sy 3.0.
Nisy koa ny horohoron-tany 56 ambanin'ny haavo 2.0 izay tsy tsapan'ny olona matetika.